စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ : နှစ်သစ်ထုတ်ပြန်ချက်
ဒီဇင်ဘာလရှိ “စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ” ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး သင်၏ နှစ်သစ်စိတ်ကူးအိပ်မက်များနှင့်ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါ။
FBS သည် ယခုနှစ်ကိုသင်နှင့်သင်မြတ်နိုးသောသူများအတွက် မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်ပြုလုပ်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ဆန္ဒတစ်ခုပြုပြီး ၄င်းကိုဖြစ်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေလိုက်ပါ။ ဖော်ပြပါကို ရိုးရိုးလေးလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ :
1. ၁။ FBS ဖောက်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်တာသေချာပါစေ။ မဖြစ်သေးရင်တော့ ဒီနေရာကနေအကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုက်ပါ : https://my.fbs.com/registration 2. ၂။ ပေးထားသော link ကနေ သင်၏ Facebook ပရိုဖိုင်းကို သင်၏ FBS အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး “သင်၏ Facebook ပရိုဖိုင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း” ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ : https://fbs.com/promo/dreams 3. ၃။ သင်၏ FB စာမျက်နှာရှိ မိတ်ဆွေများသို့ ၄င်းပို့စ်ကိုမျှဝေလိုက်ပါ။ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်အကြောင်း ရေးသားရန်မမေ့ပါနှင့်။ 4. ၄။ Likes များများရအောင်စုဆောင်းလိုက်ပါ။
ထိုသူများသည် FBS မှအကူအညီဖြင့် ၄င်းတို့၏ဆန္ဒများအား ၏ ဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ရန် သတ္တိရှိပါသလား?
Wan Mer သည် အမှန်တစ်ကယ်အောင်မြင်သော အရောင်းအဝယ်အဝယ်သမားတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ FBS ၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများဆီမှ လေးလေးနက်နက်အကြံပြုချက်များရရှိပြီးဖြစ်သည်။
Steven Than Lvorm သည် ASUS Transformer Book တစ်ခုနှင့် FBS CEO လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ကံကောင်းစေသည့် တီရှပ်တစ်ထည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Junet Keren သည် LG G5 တစ်ခုနှင့် ၄င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ အားကစားပွဲများတွင် ပျော်ရွင်ရန် FBS အမှတ်အသားတီရှပ်လေးထည်အလိုရှိခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အနိုင်ရရှိသူဖြစ်လိုပါသလား? ဒါဆိုသင်ဘာကိုစောင့်နေမှာလဲ? ယခုပဲပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ!